Sadiiq Oo Ah Wiilkii Ka Ooyay Xafladdii Arooskiisa Oo U Jawaabay Dadkii Ku Dhaleeceeyay Baraha Bulshada - Aayaha
Waxaa baraha buslshada aad looga hadal hayaa wiil ku ooyay xafladdii arooskiisa, waxay dadka ka doodayaan sababta uu u ilmeeyay iyagoo qaarkood leh wuxuu u ooyay “jaceylka uu xaaskiisa u qabo”.
”Dadka baraha bulshada arrintan aad ayey uga hadal hayaan waan arkay, qaarba si xun u turjumay laakiin qof walbo bini’aadam ah oo qalbi leh maalin ayuu ooyaa, waxaan la ooyay farxad darteed, sida ay qoyskeeyga uga soo qeyb galeen xaflada arooskeyga iyo inaan hantiyay qofkaan dunida ugu jeclaa”, ayuu yiri Sadiiq Cabdinasir oo BBC-da la hadlay.
“Wiilka wuxuu la ooyay jaceeyl uu u qabo xaaskiisa, laakiin waxay ahayd inuu qarsado oo markay isku soo haraan uu iyada kali ah u u muujiyo jaceylkiisa, reer Muduga laguma ogeyn calool jileecaas” ayuu yiri Cabdirisaaq Dhilood oo Garoowe jooga.
”Waxaan ka aaminsanahay arrinta hadal haynta badan dhalisay ee Sadiiq Cabdinaasir uu ooyey xiligii aqal galka inay ku keentay jacayl uu u qabay xaaskiisa waxayna ahayd dareen geesinimo iyo kalsooni leh ee u muujiyey nolashiisa cusub,wuxuuna raga Soomaaliyeed u noqday tusaale” Ayuu yiri Cabdirisaaq Axmad Jaamac oo ka mid ah dhageestayaasha BBC-da.
Sadiiq iyo xaaskiisa Ilhan.
Geeraar ammaan ah oo aad u macaan